October 2021 – " कञ्चनजंगा News "
नेपाली भूमी लिपुलेकमा भारतीय सेनाको परेड, लाप्चामा पनि चीनले गाड्यो झण्डा-भिडियो सार्वजनिक
No Comments on नेपाली भूमी लिपुलेकमा भारतीय सेनाको परेड, लाप्चामा पनि चीनले गाड्यो झण्डा-भिडियो सार्वजनिक
भारतले नेपालको भूमी मिचेको विषय सुल्झन नपाउदै चीनले नेपालको भूमीमा झण्डा गाडेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । बेलाबेलामा सिमा विवाद बल्झिरहदा सरकारले भने ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नेपालको भूमी लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपनि जमीन भने अहिले सम्म फिर्ता भएको छैन । सरकारले कुटनितिक तबरबाट समस्या समाधान गर्ने भने पनि अहिलेसम्म लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेका छन् । भारतसँगको समस्या ज्यू कहाँ त्यू रहेका बेला चीनले भूमी मिचेर झण्डा गाडेको घटना बाहिर आएको हो ।
यो भिडियोमा उचाईको भू-भागमा चीनको झण्डा फहरिइरहेको देखिन्छ । झण्डा देखाउँदै एकजना युवक बोल्न थाल्छन् । उनी कैलाश पर्वतलगायतका क्षेत्र देखाउन थाल्छन् । लिमी लाप्चा सीमाको यो क्षेत्र देखाउँदै युवक भन्छन्,‘सरकार बोल्दैन, हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’ युवकले स्वास्थ्य शिविर गर्न जाँदा पुगेको भनेका छन् । यो क्षेत्र हुम्लाको नेपाल चीन सीमामा पर्छ ।
यदि यो सत्य हो भने नेकपा एमाले (खड्ग ओली गुटलाई) राष्ट्रिय गद्दार दल घोषणा गरेर नेपाल-चीन सीमा विवाद बारे उसले व्यक्त गरेको औपचारिक धारणालाई जनजन समक्ष पुऱ्याईयोस् !! pic.twitter.com/uQMI3OnsAQ
— स्वारी (@ptkums) October 31, 2021
के हो ई–पासपोर्ट ?अर्को महिनादेखि ई–पासपोर्ट जारी हुने, यस्तो छ विशेषता
No Comments on के हो ई–पासपोर्ट ?अर्को महिनादेखि ई–पासपोर्ट जारी हुने, यस्तो छ विशेषता
काठमाण्डौ ,राहदानी विभागले आउँदो महिनादेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ ।अहिले जारी भइरहेको एमआरपी पासपोर्टभन्दा पनि सुरक्षित, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ई–पासपोर्ट आउँदो नोभेम्बर १५ देखि राहदानी विभागले परीक्षणको रूपमा जारी गर्न थाल्ने विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शरद राज अरनले जानकारी दिनुभयो ।
डि’ भो ‘र्स गरिसकेकी पत्नीसंग स’म्ब’ न्ध बनाउन यी श्रीमानले जे गरे त्यो कसैले सोच्नै सक्दैनन !
No Comments on डि’ भो ‘र्स गरिसकेकी पत्नीसंग स’म्ब’ न्ध बनाउन यी श्रीमानले जे गरे त्यो कसैले सोच्नै सक्दैनन !
डि—भो—-र्स गरिसकेकी पत्नीलाई क’——र’—–णी ग—’रे—’को आ–रो—–प—-मा सुनसरीको धरानबाट एकजना व्यक्ति प——क्रा—उ परेका छन्। डि—भो—-र्स गरिसकेकी पत्नीलाई क’—र’—-णी ग’रे’को आ—रो—प—मा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले वडा नं. १५ निवासी भोजराज थापा ‘फडिन्द्र’लाई प—क्रा—उ गरेको हो।
इप्रका धरानका डीएसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार पूर्वपत्नीलाई क–’ र’— णी ग—’रे—’को उ —जु—री—को आधारमा उनी प—क्रा—-उ परेका हुन्। उक्त घ—ट—ना यही बिहीबार भएको बताइएको छ। पी—–डि——-त—का छोराछोरी दुवैले घ—ट–ना–बारे पनि बयान दिएपछि उनलाई प—क्रा—-उ ग—रिएको डिएसपी कुँवरले बताएका छन्।
‘उनीहरुबीच डि—-भो—–र्स भइसकेको हो । तर क—-’र——’णी ग’—रे’—को उ—–जु—-री परेको छ’, उनले भने, ‘छोराछोरीले समेत घ—ट—ना भएको बताएकाले प—-क्रा–उ गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।’ छोराछोरी अर्को कोठामा सुतिरहेको बेला पूर्व पत्नीलाई उनले ज,—व—र—–ज,—-स्ती गरेका थिए। उक्त कुरा देखेपछि छोराछोरीलेसमेत प्रहरीलाई बताएका थिए। प्रहरीले पी——डि—-त महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
No Comments on छालामा एलर्जी भयो ? नआत्तिनुहोस् तपाइँको घरमै छन् ओखती , गर्नुहोस् यस्तो कार्य
No Comments on यी हुन् आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर सिने क्षेत्रमा आएका नेपाली चर्चीत अभिनेत्री
काठमाडौं /जन्मिदा एउटा नाम भए पनि करियर अघि बढेसँगै आफ्नो’ नाम बदल्ने गरेका छन्। यसरी आफ्नो नाम ब’दल्नु कुनै ठुलो कुरो हैन।
कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ ?त्यसो भए यो पढ्नुहोस
No Comments on कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ ?त्यसो भए यो पढ्नुहोस
लौ है केटा साथीहरु हो बिभिन्न माया-प्रेमका खोज तथा अनुसन्धानको ब्यापक अध्ययन गरी तपाईंहरु माझ यो लेख प्रस्तुत गरेका छौ । भरपुर फाइदा उठाउनुहोस । आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । केटाले सकेसम्म केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आफ्ना कुरा गर्ने तरिका तथा आफू प्रस्तुत हुने तरिकाका बारेमा सजग हुनु जरूरी हुन्छ ।
यी हुन् भुताहा जहाज जुन अहिले पानीबाट बाहिर निस्किए, यस्तो छ रोचक कहानी पढ्नुहोस्
No Comments on यी हुन् भुताहा जहाज जुन अहिले पानीबाट बाहिर निस्किए, यस्तो छ रोचक कहानी पढ्नुहोस्
काठमाडौं। जापानको राजधानी टोक्यो नजिकै प्रशान्त महासागरमा ज्या’ला’मु’खी वि’ष्फो’ट हुँदा २ दर्जन भुताहा जहाज बाहिर निस्किएका छन् । जापानको अल निप्पो न्यूजले हेलिकप्टर फुटेजमा यी जहाजहरु देखाएको छ । हेलिकप्टर भूकम्पीय गतिविधि र ज्वा’ला’मुखी वि’ष्फो’टपछि यो समुद्री षे’त्रको समाचारको लागि फोटो लिइरहेको थियो र भिडियो फुटेज बनाइरहेको थियो । यी भुताहा जहाज दोस्रो विश्वयु’द्धकालका हुन् ।
टोक्योबाट १२०० किलोमिटर दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको इयो जिमा द्विपनजिकै दोस्रो विश्वयुद्धका २४ युद्धपोत देखिएका छन् । यी समुद्रभित्र डु’बे’का थिए । तर, फुकुतोकु ओकानोबा ज्वा’ला’मुखी वि’ष्फो’ट र भूकम्पका कारण यी जहाजहरु बाहिर निस्किएका हुन् । यीमध्ये कैयौं जहाज द्विपको तटनजिकै बग्दै आएका थिए ।
दोस्रो विश्वयु’द्धमा यो स्थानमा भएको यु’द्ध’लाई ब्या’टल अफ इयो जिमा भनिन्छ । १९४५ मा भएको भयानक युद्धमा अमेरिकी सेनाले यहाँ कैयौं जहाज डु’बा’इदिएको थियो । यहाँ ७० हजार अमेरिकी मरिनले २० हजार जापानी सैनिकसँग यु’द्ध गरेका थिए । यो युद्धको अन्त्यसम्म २० हजार अमेरिकी मरिन घाइते भएका थिए । करिब ७ हजार मरिन मा’रि’एका थिए । जापानी सैनिकमध्ये केवल २१६ जना सैनिक मात्र बचेका थिए ।
अहिले पानीबाट बाहिर निस्किएका जहाजहरुमध्ये धेरैजसो ढुवानी गर्ने जहाज छन् । यी जहाजलाई पहिले अमेरिकी नौसेनाले जफत गरेको थियो । अमेरिकी नेशनल आर्काइभका अनुसार पछि अमेरिकी सैनिकले यी जहाजलाई ब’म प’ड्का’एर डु’बा’इदिएका थिए । इयो जिमामा कुनै बन्दरगाह थिएन त्यसैले जहाज द्विपको समानान्तर डु’ब्दै समुद्रभित्र गएका थिए । यी जहाजबाट समुद्रभित्र भित्तोजस्तो बनेको थियो जसले तीब्र छालहरुबाट द्विपलाई बचाइरहेको थियो ।
किन अविवाहित भन्दा विवाहित महिलातर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् पुरुष ?
No Comments on किन अविवाहित भन्दा विवाहित महिलातर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् पुरुष ?
विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको अर्को पक्ष यौ—’न रहेको छ । यौ’–न—सम्बन्ध बारेको प्रस्तावका लागि अविवाहित भन्दा विवाहित सहज हुने युवाहरको अनुमान र अपेक्षा हुन्छ ।
साताको पहिलो दिन घट्यो सुनको भाउ, प्रतितोलाको कति ?
No Comments on साताको पहिलो दिन घट्यो सुनको भाउ, प्रतितोलाको कति ?
आज साताको पहिलो दिन अर्थात (आइतबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ पुनः ओरालो लागेको छ । आज सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेर छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
छापावाल सुन शुक्रबार प्रतितोला रु ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार भएको सुनचाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा दैनिकरुपमा सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ।
महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेको छ । आज तेजावी सुन प्रतितोला रु ९१ हजार २०० रहेको छ । जसको मूल्य बिहीबार प्रतितोला रु ९१ हजार ७०० रुपैयाँ रहेको थियो।
सुनको भाउ सँगै आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु एक हजार २४० रहेको छ । शुक्रबार चाँदी रु, १ हजार २४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।